के तपाई बायाँ तर्फ ढल्केर सुत्नुहुन्छ ? यस्ता छन बायाँ तर्फ ढल्केर सुत्नुका ६ फाइदा « Sajhapage24
के तपाई बायाँ तर्फ ढल्केर सुत्नुहुन्छ ? यस्ता छन बायाँ तर्फ ढल्केर सुत्नुका ६ फाइदा
एजेन्सी । धेरैजसो स्वास्थ्य जीवनको कुरा गर्दा हामी कस्तो खानपान गर्ने भन्ने विषयमा मात्र चर्चा गर्छौ । सन्तुलित खानपान र व्यायाम नै हामीलाई पर्याप्त लाग्छ, स्वस्थ्य जीवनको लागि । तर, यति मात्र काफी छैन । त्यसबाहेक अन्य स-साना आनीबानी जसले हामीलाई रोगी र जिर्ण बनाइरहेको हुन्छ । जस्तो कि सुत्ने पोजिसन वा तरिका ।
कति सुत्ने:- स्वस्थ्य जीवनका लागि खानपान र व्यायाम जति आवश्यक छ, उत्तिनै निन्द्रा पनि । भनिन्छ, स्वास्थ्य जीवनका लागि दैनिक ७ वा ८ घण्टा मस्त निदाउनुपर्छ । बच्चाहरुले भने उमेर अनुसार यो भन्दा बढी समय निदाउनु पर्छ । वयस्कले कम्तीमा ८ घण्टा निदाउनै पर्छ ।
किन सुत्ने:- – निद्रा गहिरो हुनुपर्छ । र, गहिरो निन्द्रा पाउन मानसिक र शारीरिक रुपमा तन्दुरुस्त हुनुपर्छ । सुत्ने ओछ्यान, वातावरण, पोजिसन आदिले पनि हाम्रो निन्द्रलाई प्रभावित तुल्याउन सक्छ ।
कसरी सुत्ने:- वास्तु विज्ञान अनुसार पूर्व वा उत्तर दिशातर्फ शिर राखेर सुत्नु राम्रो हो । सुताईको पोजिसन र पृथ्वीको चुम्बकिय प्रभावले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । सुत्दा धेरै अग्लो सिरानी राख्नु् हुँदैन ।
४. कलेजो र मृगौलाले राम्ररी काम गर्छ:
५. कब्जियतबाट छुटकारा:
अम्बा भन्दा अम्बाको पात फाइदाजनक जानी राखौँ कसरी प्रयोग गर्ने